HTC dia manohy manatsara ny varotra, saingy miandalana | Androidsis
HTC dia manohy manatsara ny varotra, saingy miandalana
HTC dia eo am-piandohana mitsikera. Ny orinasa Taiwaney dia nahita ny fihenan'ny varotra vokatra, araka ny hita tamin'ny tatitra ara-bola vao haingana. Tamin'ny volana oktobra dia naneho tatitra mampiseho ireo tsimoka maintso voalohany izy ireo. Ary toa naverin'izy ireo tamin'ny Novambra.
Ary izany ve dia tatitra ara-bola vaovao iray amin'ny volana Novambra no mampiseho fa nihatsara kely ny varotra raha oharina amin'ny volana teo aloha. Mazava ho azy, tsy tokony manipy lakolosy amin'ny lalitra ihany koa isika, toy ny efa nolazaiko Tena ratsy ny toe-bolan'ny HTC.
Ny tatitra ara-bola vaovao an'ny HTC dia mampiseho ny fanatsarana ny varotra an'ny orinasa noho ny fivarotana ny HTC One A9
Fa nanao ahoana ianao Hiverina amin'ny lalan'ny tombom-barotra ve i HTC amin'ny lafiny toekarena? Ny tsiambaratelo dia mitoetra ao amin'ny HTC One A9 vaovao, finday iray izay mivarotra tsara na eo aza ny vidiny lafo. Azo antoka fa mpanjifa maro no nanararaotra ny fihenam-bidy voalohany azon'ilay finday avo lenta HTC amidy any Etazonia.
Varotra marina nihatsara 14.96% raha oharina tamin'ny Oktobra, Ny vola miditra mahatratra 314.32 tapitrisa dolara amerikana. Saingy araka ny nolazaiko, dia mbola ratsy be ny zava-drehetra.
Ary raha ampitahaintsika ny varotra natao nandritra ny volana Novambra 2015 tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa 2014, dia miova be ny toe-javatra: HTC dia nianjera tamin'ny fianjerana 39.25% izay midika ho very vola mitentina 3.500 tapitrisa dolara amerikana. Saika tsy misy. Eny, miala tsiny indrindra aho, fa manana ny sahaza azy izy ireo.
manokana tiako ny htc toy ny marika. Ny findaiko ankehitriny dia ny HTC One M7, fitaovana iray izay mbola miasa tsara ho ahy aorian'ny fampiasana roa taona mahery. Saingy tsy nahavita namorona ny tenany indray ilay mpanamboatra Taiwanese. Ireo taranaka manaraka dia voavaha tamin'ny endrika raha oharina amin'ny maodely voalohany ary etsy ankilany manana ny vidiny isika.
HTC dia nanaraka ny politikam-bidy tena ratsy. Etsy andaniny, manana ny halavany avo isika amin'ny vidin'ny fanararaotana. Iza no hividy sainam-pirenena HTC raha mitentina eo amin'ny 100 euro eo ho eo ny salanisan'ny mpifaninana aminy? ary avy eo misy ny olana momba ny elanelam-potoana, izay raha ny fahitako azy no tena mandeha ra. Ny olana dia ny fivarotana ilay goavana Taiwaney amin'ny vidiny avo lenta. Ary amin'ny lafiny teknika dia afaka mahita vahaolana mora vidy kokoa ianao miaraka amin'ireo fiasa mitovy na tsara kokoa aza.
EManantena aho fa manatsara ny toe-javatra misy azy ireo i HTC ary afaka mankafy sangan'asa indray isika toy ny HTC Desire, Sensation na HTC M7. Ary ianao, ahoana ny hevitrao? Mieritreritra ve ianao fa ho afaka hiverina amin'ny ora ara-potoana i HTC?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC dia manohy manatsara ny varotra, saingy miandalana